गत वर्ष संक्रमण शुरू भएयता २०७७ चैत मसान्तसम्ममा यस उमेर समूहका १८ हजार ४०८ जनामा संक्रमण देखिएको थियो । संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा मृत्युदर पनि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार संक्रमणका कारण वैशाख २८ गतेसम्म १० देखि १९ वर्षमुनिको उमेर समूहका २६ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यस्तो छ विज्ञहरूको सुझाव
विज्ञहरूका अनुसार बालबालिकालाई भिडभाडमा नलैजानु नै संक्रमण रोकथामको पहिलो उपाय हो । ईशान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक प्राडा आरपी चौधरी संक्रमण रोकथाम नै सबैभन्दा महत्वपूर्ण हुने बताउँछन् ।
उनले भने, ‘पहिलो त संक्रमण हुन नदिनु नै राम्रो हो, संक्रमण भइहाल्यो भने पनि नआत्तिई धैर्यसाथ उपचारमा लाग्नुपर्छ ।’ बालबालिकालाई घरबाहिर लिएर जानै पर्ने भएमा उचित ढङ्गले मास्क प्रयोग गराउन, भौतिक दूरी कायम गराउन, स्यानिटाइजर प्रयोग गराउन, साबुनपानीले हात धुन लगाउन र अन्य उपाय अपनाउन डा. चौधरीको सुझाब छ ।
बालबालिकाको उमेर अनुसार आफैँ सफाइ गर्न नसक्नेलाई अभिभावकले गराउन र गर्न सक्नेलाई मापदण्ड पालना गर्न सिकाउन पनि उनको सुझाब छ । परिवारका कुनै सदस्यलाई कोरोना संक्रमण भएको छ भने बालबालिकालाई संक्रमितबाट टाढा राख्नु र्छ । संक्रमति व्यक्तिले अरूलाई सर्न नदिन मापदण्डअनुसार सुरक्षाका सबै उपायहरू अपनाउनुपर्छ ।
भिटामिन सी युक्त पोषिलो खानेकुराले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने भएकाले यस्तो खानामा जोड दिन चिकित्सकहरूले सुझाब दिँदै आएका छन् । डा. चौधरीका अनुसार संक्रमित बालबालिकालाई सास फेर्न कठिन भएको छैन, ज्वरो सामान्य छ र पखाला लागेको छैन भने घरमै आइसोलेट गरेर राख्न सकिन्छ ।
सास फेर्न कठिन भएको, उच्च ज्वरो आएको वा शरीरमा अक्सिजन कम भएको अवस्थामा भने जतिसक्दो चाँडो अस्पताल लगेर चिकित्सकको सल्लाह बमोजिम गर्न डा. चौधरीको सुझाब छ ।
जनस्वास्थ्यविद् डा.रवीन्द्र पाण्डे बालबालिका र सबै उमेर समूहका मानिसले कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले तोकेका स्वास्थ्य मापदण्ड अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताउँछन् । दुई वटा सर्जिकल मास्क उचित तरिकाले प्रयोग गरेर, भौतिक दूरी कायम गरेर तथा सुरक्षाका अन्य नियम पालना गरेर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सकिने डा.पाण्डेले बताए ।